Sooyaalka taariikhda ugaasyadii beelaha samaroon . – Abdominal Belts
Sooyaalka taariikhda ugaasyadii beelaha samaroon .
alnuur – Waxaan ka soo guurinay tariikhdan buuga uu qoray Sheekh Cabdulraxman Sheekh Nuur Cabdulaahi oo ahaa sheekhii alufay Far Gadabuursiga (Gadabursi script), fartaas oo aad looga yaqaano Aduun waynaha.
Kolkay taariikhdu ahayd qarnigii tobanaad ee hijriyada qabiilka Gadabuursiga waxaa ku yimid dhibaato badan oo kaga timid dagaalo fara badan oo la galeen qoomiyadihii jaarka la ahaa, ha u waynaadoo dagaaladii ay la galeen qabiilka Gaalada (Oromada).Dagaaladaa waxaa ku dhintay dad fara badan. Markay dhibtii ku badatay ayay is waydiiyeen Gadabuursigii sidii ay uga bixi lahaayeen. Markii in badan la garfaynayay arrinta dhibta waxaa la go’aansaday in la yeesho hogaan. Waxaa talo lagu gaadhay in la sameeysto nin Ugaas ah.
Kolkay muddo dheer laga tashanayay sidii loo dooran lahaa ninka laga dhigayo Ugaaska waxay g’aamiyeen in ninka kaliya ee arrintaa wax ka qabanaayaa uu yahay Cali Makaahiil Dheere. Sababta ay u doorteen baa ahayd Cali Makaahiil Dheere inuu leeyahay sifooyin badan uu wax ku hogaamin karo sida aqoontiisa diineed, caqli waynaantiisa,sharaftiisa,faseexadiisa, bashaashnimadiisa,waj-furnaantiisa,hal adaygiisa, iyo geesinimadiisa.
Qodobadan soo soco waxay ka mid ahaayeen xeerarkii Gadabuursigu samaysteen
1. Waxay go’aamiyeen oo isla waafaqeen dhamaantood inuu ahaado Ugaaska Gadabuursiga noqdo Ugaas Cali. Sidaas ayuuna ku noqday Ugaaskii ugu horayay ee loo doortay madaxnimada. Ayna ahaato boqornimadaasi tu ku kooban reerka uu ka dhashay Ugaas Cali oo kaliya. Hadduu Ugaasku geeriyoodo in uu Ugaasnimada uu ka dhaxlo wiilkiisa ugu wayn, ayna u kala qaataan boqornimada siday u kala wayn yihiin, haddii wax murani ka yimaado marka caleen saarka waxaa la soo dhex dhigayaa boqolka oday ee la taliya Ugaaska oo go’aan ka gaadhi jiray.
2. Waxa Ugaaska la talin jiray boqol oday oo Gadabuursiga laga soo dhex doorto. Boqolka oday waxaa laga sii dhex dooran jiray afar oday oo Ugaaska mar walba la jooga, waxaana lagu magacoodu wax uu ahaa afartaa oday Afarta Dhadhaar.
3. Xukunka ama maamuku waxa uu ahaa mid laga wada tashado oo (Shuuro) ah. Marka arrin timaado Ugaaska iyo boqolka oday ayaa fadhiisan jiray si ay u xeeraan arrinka marka jira, haddii uu arrintu noqoto mid aan wali hore loo arag waa Ugub arrinku bay odhan jireen. Haddii arrintu noqoto mid hore loo soo arkay oo xeer ka xeer ka yaalo waxay odhan jireen arrintu waa Curad. Wixii ugub ah xeer cusub bay ka soo sari jireen. Amuur hore loo arkay haddii yahay arrinku waxaa la raacayaa xeerkii ka jiray.
4. Marka ay timaado in la caleemo saaro Ugaaska marka hore waa in boqolka oday ansixiyaan, ka dib waxaa la iskugu yeedhi jiray raga madaxda ka ah beesha Gadabuursi oo ka kala yimaada jililb kaste oo Gadabuursi, taas waxay ahayd in loo dhanaado caleemo saarkaa marka taagan.
5. Maalinta la caleemo saarayo Ugaaska oo ahayd xaflada ugu wayn waxaa loo agaasimi jiray sida, waxaa Ugaaska la gayn jiray ceelka la yidhaahdo BAGI. Marka lagu sii wado Ugaaska ceelkaas waxa uu sii fuulaa faras cad, waxaana sii galbin jiray Ugaasku isagoo dhexda ugu jiro 50 farda fuul oo dhlinyara ah oo fardahoogii wata lagana soo xulay inta jilib ee uu ka kooban yahay Gadabuusigu. Dhalinyaradaasi waxay ku labisan jireen laba go’ oo cad cad iyo waran gaashaan. Ceelkaa waxaa ku samaysan dhegax cad oo wayn. Dhagaxaa ayuu Ugaasku ku dul fadhiistaa uu ku maydhan jiray. Marka uu maydho waxaa Ugaasku ku labisan jiray laba go’ oo cadcad oo cusub.
Marka Ugaaska laga soo celiyo ceelka waxaa la keeni jiray guri si fiican loo daleeyay oo la dhisay intuu uu ku maqnaa ceelka Bagi. Waxaa meesha ku sugi jiray Gadabuusi aad u fara badan. Ugaasku wax uu fadhiistaa ardaaga gurigaa. Seddex gabdhood ayaa soo hor dhigi jiray seddex gorof oo ay ku kala jiraan caano lo’aad, caano geel, iyo caano adhi. Ugaasku isagoon garanayn caanaha ku kala jira gorofyadaa ayuu mid inta uu qaado ayuu kabadaa, Gadabuursi goobta joogay ayaa hugun iyo mashxarad isku dari jiray. Waxay ay rumaysnaayeen caanaha uu hor kabaday Ugaasku in ay xoolahoogu noqon doonaan ku tarma.
Laga bilaabo sacaada waxaa guriga agagaarkiisa lagu qaban jiray wax lagu magaacabo Tumasho oo iskugu jira cayaaro, farada ku ciyaar, waxay na socon jirtay cayaartaa iyo dabaal dagaasi muddo todoba cisho ah.
6. Waxaa kale oo xeer ahayd in qabiilooyinka aan jaarka nahay ee inagu meersan in lagu la dhaqmo nabad, lagu na dadaalo nabadayn haddii uu khilaaf yimaado oon dagaal lagu dagdagin.
7. Xukunka xagga diyada in la raaco sida Shareecada Isaamku dhigayso.
8. Umuuraha guurka,furiinka, iyo dhaxalka in la raaco sida ay tidhi Shareecadu dhigaysaa.
9. Waxaa kale oo xeer ahayd (Gadabuursi waa beel ee ma ah bah) taas waxay sheegaysaa in Gadabuursigu siman yahay oo laga fogaado qabyaalada Gadbuursiga dhexdiisa. Waxaa ka marag kacaya xeerka marka Gadabuusigu uu ciyaarayo ciyartiisii GUCUSTA labada kooxood ee wada ciyaaraya waxay la kala bixi jireen magacyo ka fog qabiil. Magacyada ay la bixi jireen waxaa kala ahaayeen Agoon iyo Abooleh, Dacar joog iyo Dhagax joog, Cankaable iyo Quude, Doob iyo Goobaale.
10. Waxaa jiray lix Oday oo Xeerbeegti ah, oo xeerka Gadabuursiga aad u yaqaana hayayna xeerarka marka la dajiyo. Wixii xeer ah ee la isku qabto ama lagu murmo lixdaa oday ayaa loo gayn jiray arrinka taagan. Waxay sheegi jireen waxii xeer ah ee ka yaala dhacdadaa iyada ah. Ragaasi waxay aad ugu dadaali jireen xaga Deedifada ama (Difaaca).
Waxa Isku Soo Duba Riday
Mahdi Qaadi – Ohio, USA
F.G: Ugaas Cali Makahiil Dheere oo ay ka tafiirmeen Ugaasyada Samaroon waa qabiil dhan oo loo yaqaan Reer Ugaas.Waaxa uu Ugaas Cali Makahiil dheere ka tirsada Samaroon Sadex Oday o kaliya oo kala Makaahiil Dheere(Abihii),Muse, Makaahiil iyo MAKADOOR SAMAROON.Waxa uu Ugaas Cali Makahiil dheere la Facyahay Ilma adeer na ay yihiin Afarta Ilma Yoonis.Sida (Niur Yoonis J/Yoonis Aden/Yoonis iyo Cali Yonnis).Waxan arintan aanusoo qaadanay kaliya inan idin xasuusino Boqortooyada ama Ugaasnimada Samaroon inay tahay middda ugu facweyn Boqorada Somalida oo la soo bilaabantay qoyskii Sheekh Samaroon Bilowgiisi.Warsanmag.
Soma street prices » enter approved canadian rx main page – soma street prices → ← Odayaasha iyo waxgaradka beesha biimaal oo si kulul uga hadlay xaalada magaalada marka ee sh/hose!(daawo muuqaal+warbixin) | warar sugan